FIJALIANA SOLIKA AO ANTALAHA : Manambana hitroatra ireo mpamily “Bajaj”
Raha ny fitarainana voaray avy amin’ny mpanjifa solika ao anatin’ny Faritra Sava dia mbola tsy voavaha ny olana manoloana ny fijaliana solika. 17 septembre 2019
Raha tsiahivina, efa hatramin’ny volana aogositra tany ho any no nisedra ny tsy fahampiana solika ny mponina ao Antalaha, Antsohihy, Sambava. Manjaka sy mahazo vahana ny varo-maizina sy risoriso. Azo lazaina, hoy izy ireo fa lasa bizina vaovao sy ketrika avo lenta ny varotra lasantsy ankehitriny, izany hoe mirohotra mivarotra any anelakelan-trano avokoa ny olona, manararaotra mampiakatra ny vidiny amin’izay tiana.
Araka ny zava-misy ny faran’ny herinandro lasa teo iny izao dia saika feno zerikana sy ireo fiarabe) mitondra barika manga indray ny fivarotan-dasantsy, izy ireny rahateo no mahazo voalohany ary tsy maintsy omena izay tadiaviny. Raha vao misy solika tonga eo an-tanàna dia efa ifandrombahana, ka fotoana vitsy aty aoriana dia tapitra ritra, hoy ny fanazavan’ny tompon’andraikitra. Nisy ny fanamarihana nataon’ny mpamily Bajaj ao an-toerana izay manambara fa ny mpitondra zerikana indray no mahazo izay ilainy, satria voalaza fa ahazahoan’ny ’pompiste’ roa arivo ariary isaky ny zerikana (20 litatra eo) izy ireny".
Lasa ireo mpamily indray no tsy mahazo ny anjarany, hany tsy afaka miasa ara-dalàna noho ny tsy fisiana lasantsy. Ny tena olana amin’ny mpividy solika amin’ny zerikana anefa dia izy ireo indray no mivarotra ny solika eny anelakelan-trano rehetra eny sy any ambanivohitra izay efa mahatratra 5.000 Ar ny ivarotan’izy ireo ny 1 litatra, indraindray aza mahatratra 6.000Ar na 8.000Ar mihitsy. Misy manararaotra hatrany amin’ny 9.000 ar aza rehefa tena hamatra sy lany tanteraka eny amin’ny tobin-dasantsy.
Manaitra ny tompon’andraikitra mahefa
Miangavy tanteraka ny tompon’andraikitra ny mpanjifa, indrindra fa ny mpamily bajaj manoloana izao toe-draharaha izao. Tsara hatrany, hoy izy ireo, ny manamarika fa ny fivarotan-dasantsy dia ny Jovena, Shell ary Total, ary tokony ireo ihany no mpivarotra solika ara-dalàna ao Antalaha. Raha toa kosa anefa tsy misy ny fandraisana andraikitra hentitra eo anatrehan’ity fampanjakana ny varo-maizina ity dia hitroatra sy hanomana hetsika goavana ny mpamily, mpampiasa fiara ao an-toerana raha ny fanampim-panazavana voaray hatrany.